Nepali Rajneeti | मुख्य पृष्ठअन्तरास्ट्रिय‘कपिल शर्मा शो’ की सुमोनालाई लाग्यो यस्तो निकै ख’तरनाक रो’ग ! ‘कपिल शर्मा शो’ की सुमोनालाई लाग्यो यस्तो निकै ख’तरनाक रो’ग !
मुख्य पृष्ठअन्तरास्ट्रिय‘कपिल शर्मा शो’ की सुमोनालाई लाग्यो यस्तो निकै ख’तरनाक रो’ग ! ‘कपिल शर्मा शो’ की सुमोनालाई लाग्यो यस्तो निकै ख’तरनाक रो’ग !
जेठ १, २०७८ शनिबार २१४ पटक हेरिएको
भारतीय चर्चित टेलिभिजन शो ‘द कपिल शर्मा शो’मा सुनिल ग्रोवरको छोरीको भूमिकामा अभिनय गर्ने सुमोना चक्रवर्तीको सामाजिक सञ्जालमा १० लाख फ्यान फलोइङ छन् । फ्यान फलोइङ धेरै भए पनि उनी सामाजिक सञ्जालमा त्यति सक्रिय हुन्नन् ।
आजतकका अनुसार हालै सुमोनाले आफू ए’ण्डो’मे’ट्रि’यो’सि’स रो’गको चौथो चरणसँग जु’धिरहेको खुलासा गरेकी छन् । उनले लकडाउनले निकै स’मस्या परेको भन्दै भावनात्मक रुपमा रो’गसँग ल’ड्न नसकेको जनाएकी छन् ।‘म अहिले बेरोजगार छु ।मसँग कुनै काम छैन ।
तर पनि परिवार र आफूलाई पा’लनपोषण गरिरहेकी छु’, उनले लेखेकी छन्, ‘मैले आज धेरै समयपछि घरमा व’र्क आउट गरें । केही दिनमा प’छुतो अनुभव गरिरहेकी छु । किनकी कैयौं पटक उ’दासी हाम्रो लागि राम्रो हुन्छ ।’उनी सन् २०११ देखि यो रो’गसँग जु’धिरहेकी छन् । यो रो’गसँग ल’ड्न स्वस्थ खाना, व्यायाम र त’नाव मु’क्त जीवन प्रमुख औ’षधि रहेको उनको बुझाई छ ।
इ’ण्डो’मे’ट्रि’यो’सि’स एक प्रकारको शा’रीरिक स’मस्या हो । जसमा महिलाको यो’नी’भित्रको न’शा बाहिरको ला’इ’नि’ङमा आउछ । यस्तो न’शा फे’लोपि’यन ट्यू’ब, पा’ठेघ’र र कैयौं पटक आ’मासयसम्म पुग्छ । जसकारण पेटको दु’खाई बढ्छ ।यसको लक्षण तल्लो पेटको दु’खाई र म’हिनावा’री अ’नियमित हुनु हो । यसबाट बि’सेक हुन स’र्जरी या हा’र्मो’नयुक्त औ’ष’धिको से’वन गर्नुपर्छ ।